Kármán Line: ihe ọ bụ, njirimara na mkpa | Network Meteorology
Otu n’ime ajụjụ ndị sayensị na ụmụ mmadụ nkịtị na-ajụ onwe ha mgbe niile bụ ma e nwere oke osin n’etiti ikuku na mbara igwe. A maara na ikuku ikuku na-adịwanye warara ma na-eru n’ọ̀tụ̀tụ̀ dị elu karịa ụwa ruo mgbe ọ lara. Agbanyeghị, enwere oke ikuku nke dị mkpa maka ebumnuche ụgbọ elu. A maara oke ikuku a Kármán ahịrị.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ahịrị Kármán na mkpa ọ dị.
2 Kármán Nweta
3 Uzo Kármán na akwa nke ikuku
4 Ihe omuma aru
A maara na ikuku anaghị akwụsị na mberede na otu elu na kọwaa. Achọpụtala na ikuku na-adị gịrịgịrị ma na-adị gịgị ka elu na-abawanye. Maka ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị, ikuku nke endswa na-ejedebe na ebe elu ụwa kachasị elu. Nke ahụ bụ, mbara ikuku ndị a na mbara ikuku A maara ha aha nke thermosphere na exosphere. Ọ bụrụ na echiche a bụ eziokwu, ikuku nke ụwa gaara eru ihe dịka kilomita 10.000 n ’elu oke osimiri.
Njupụta nke ikuku na-ebelata ka anyị na-abawanye elu. Yabụ, na omume a, njupụta nke ikuku pere mpe nke na enwere ike ịtụle oghere dị na mbara. Nkọwa ọzọ na-achọkarị oke nke ikuku na-eche na ọ na-akwụsị ebe njupụta nke ikuku na-adị ala. Amara nke a ebe ọ bụ na ọsọ ụgbọ elu nwere ike ịnata iji bulie ikuku elu site na nku ya na ndị na-akwalite ya ga-adaba ka ọsọ ọsọ nke otu ịdị elu. Site na nchịkọta ndị a, enwere ike ịmata ihe dị elu site n'aka ndị a maka nku ha abaghịzi uru iji chekwaa ụgbọ mmiri ahụ. N'ihi ya, Nke a bụ ebe ikuku ga-akwụsị ma mbara ga-amalite.
N'ịbụ ndị nchegbu ndị a chere ihu, akara Kármán apụtala iji chọpụta ihe njedebe n'etiti ikuku na mbara mbara.
E guzobere ahịrị Kármán dị ka nkọwa na-enweghị isi dabere na ntụle ụgbọ elu. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, enwere ike ịsị na ọ bụ oke dị n’etiti ikuku na mbara mbara igwe maka ebumnuche ụgbọ elu na nke astronautics. Ọ bụ ezie na n'ụzọ nkịtị E nweghị ịgba dị ka ndị dị otú ahụ ma ọ kpamkpam dị ka ị na-enwe ọganihu n'ịdị elu, enwere mmasị dị iche iche ụgbọ elu na mbara igwe iji guzobe akara Kármán.
Nkọwa nke ahịrị Kármán anabatarala na International Aeronautical Federation. Fedelọ ọrụ a na-ahụ maka ịtọlite ​​ụkpụrụ ụwa niile ma mata ha ndekọ na ndị na-eme njem na mbara igwe na ndị na-agụ kpakpando. Elu nke akara Kármán bụ nke usoro 100 kilomita, ma a na-eji kilomita 122 eme ihe nwere ntụaka. Akwụkwọ banyere ahịrị ụgbọ mbara igwe.
Uzo Kármán na akwa nke ikuku
Inwe ike itinye n’ọnọdụ dị mkpa nke akara Kármán n’ebe ahụ, ịmata ọnọdụ ya n’ihe metụtara akụkụ ndị ọzọ nke ikuku. Akọwawo anyị na e mere atụmatụ ịdị elu ya ka ọ dị ihe karịrị otu narị kilomita ma ọ bụ pekarịa n’ogologo oke osimiri. Ọ bụ Theodore von Kármán nyere iwu ka ịdị elu a, ya mere aha ya. E guzobere ya site na ịgbakọ elu nke njupụta nke ikuku na-adị obere nke na ọsọ nke ụgbọ elu iji nweta mbuli elu nke ikuku site na iji nku na ndị na-ebugharị ya ga-adaba na ọsọ ọsọ nke otu ogo a.
Nke a pụtara na mgbe ị ruru ogo a nke akara Kármán, nku agaghịzi adị irè iji lekọta ụgbọ ahụ ebe ọ bụ na njupụta nke ikuku dị obere. A maara ụgbọ elu na-akwado onwe ya naanị ma ọ bụrụ na ọ na-efegharị na ikuku. Ọ bụ ekele na nke a na nku nku ahụ na-ebuli ebuli nye ọsọ nke ngagharị na ikuku. Ọ bụrụ na ụgbọ elu ahụ kwụụrụ n’ikuku, ọ nweghị ike ijide ebe njupụta adịghị ezu.
Ọnọdụ ikuku na-adị gịrịgịrị karị, ụgbọelu ga-eme ngwa karịa iji bulie oke mbuli iji zere ịda. Nke a na - eme ka ọ bụrụ ihe na - atọ ụtọ ịmara ọnụọgụ elu nke nku ụgbọ elu maka akụkụ ọgụ enyere. Ihe naanị na-anọgide na-agba ya gburugburu ma ọ bụrụhaala na akụkụ ya nke ngwangwa ya zuru oke iji nwee ike ịkwụ ụgwọ maka ike ndọda. Anyị maara na ike ndọda na-eduga n'akụkụ ụwa, ya mere ihe ahu choro okwesiri ntughari di elu. Ọ bụrụ na ọsọ a na-ebelata, akụkụ centrifugal ga-ebelata na ike ndọda ga-eme ka ịdị elu ya belata ruo mgbe ọ dara.
Ihe omuma aru
A na-akpọ ọsọ ọsọ maka ngosiputa ọsọ ọsọ ọsọ, ọ na-adị iche na elu nke orbit. Maka ụgbọ mmiri dị na mbara igwe ọ chọrọ ọsọ ọsọ nke gburugburu 27.000 kilomita kwa awa. N'ihe banyere ụgbọ elu na-anwa ịgbago elu, ikuku na-adịwanye ntakịrị ma nke a na-eme ka ụgbọ elu ahụ nwekwuo ọsọ iji mepụta mbuli elu.
Site na ya amara na akara Kármán bụ echiche dị ezigbo nso na ogo. Ebe ọ bụ na mmasị ya bụ aerodynamics, ọ nweghị ọtụtụ ihe sayensị siri ike. Ikuku ikuku na-adịwanye ntakịrị ma gwụchaa na-enwe obere nguzogide ma na-abanye na mbara.
A na-eji ahịrị Kármán dị ka echiche metụtara elu ma mee ka ọ baa uru iji mee ka ọsọ njem ahụ iji nweta ebuli elu ikuku ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka ike nke ike ndọda. Mgbe anyị gara n’omume, anyị na-ahụ na echiche ndị a niile dịgasị iche iche ka okirikiri nke orbit na-abawanye. Anyị maara na kari okirikiri okirikiri nke orbit anyị nwere obere ndọda. Anyị na-echeta na ike ndọda bụ ikike ndọda na-eme na ihe dị na mbara ụwa. Agbanyeghị, a makwaara na e nwere nnukwu ọsọ ọsọ centrifugal maka otu ọsọ ahụ.
Site na ha ka amịpụtara ya na akara Kármán na-eleghara mmetụta a anya n'ihi ọsọ ọsọ nke gburugburu ka o wee zuo ike inwe ike idobe echiche ọ bụla n'agbanyeghị agbanyeghị oke ikuku.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere akara Kármán na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kármán Nweta